Rabshado dhexmaraya ciidanka iyo dadka Camaruun – Balcad.com Teyteyleey
dalka Cameroon ayaa waxaa laga soo warinayaa xiisao iyo rashbado shexmarya ciidanka shacbiga. arintaan aaya salka ka u heysa qeeyb kamid ah shacbiga camarun Angalfon afka ingriiska ku hadasho in ay donayaa inay ka go’aan qeeybta kale Faranka fortka. iyadoo ay waydan danbe si weeyn u ga cabanayaan dowlada halka dhinaca ah oo iyaga dayacaday ama xaquuqdoda u diday
dadkan ayaa ka cabanayan in luqada ugu weeyn dalka laooga hadlo la dhigay Farabka foon waxbarashada iyo xafisdyada dowlada ay ka tahay luqad muhiim. dadkan aya shegay iney ku adgathay ku hadlka farnka foonka iyaga iyo caruurtoda. sid awgeed waxaan darney faquuq iyo kalasooc ay dowlada sahrciyeyse kaa aan ku samreene mudo dheer sida ay ka wiryan saxafada aduunka dadka Angalafonka
Donatus Njong Duqaa Magalda Kumbo oo saxafada calamak la hadalay ayaa yirir calanka gooni ugoosad dadka doonya waa mid ay marhore sameysteen. olalahan waa mid heeysto taageero weeyn dhanka shacbiga oo ka careeysan. waxaana ay wadaan dibad baxyo xoogan oo jogto kana dhacaya magaloyib badan iyo degmoyin.
dalka kamaruun ayaa labo uakala jabay Dagaalki kowaad aduunka xilaga oo ay sameyn ku yeesheyn gumahstaha Ingirska iyo Farance waxaan uu ukala qeybsanayeen dad ku hadlo ingriiska iyo farance. waxana dadka leeyku daray 1961 oo nodeeyn dal madaxbanaan.
The post Rabshado dhexmaraya ciidanka iyo dadka Camaruun appeared first on Ilwareed Online.
Soomaali loo xiray weerarkii Edmonton